Xog: Maraykanka oo kordhiyay Ciidamadda ka jooga Somalia iyo Duqaymaha ay gaysanayaan. – Hornafrik Media Network
Dowladda Maraykanka ayaa kordhisay Ciidamadda ka jooga Somalia, iyadoona markii ugu horaysay ay Washington si rasmiya u shaacisay Joogitaankeeda Somalia.
Cidiamadda Maraykanka horay uga joogay Somalia waxay dhamaayeen 50 Askari, Laakiin hadda waxay gaarsiiyeen Tiradda Ciidamadda ka jooga illaa iyo 500 Askari, Waxayna sidoo kale kordhiyeen Duqaymaha ay Diyaaradaha Dagaalka ee Maraykanku ka gaysanayaan Somalia, kuwaasoo hadda u muuqda inay ka dhigeen Maalinle.
Dowladda Maraykanku joogitaan rasmi ah kuma lahayn Somalia, tan iyo markii 24 Sanno ka hor lagu dilay Muqdisho 18 Askari oo Maraykan ah, balse waxay hadda dib u soo celiyeen Maraykanku inay Saamayn Milatari ku yeeshaan Somalia.
Maraykanku waxay sannadkan ka sameeyeen Somalia illaa 28 Duqaymo Dhinaca Cirka ah, kuwaasoo 15 ka mida ay dhaceen 3 Billood ee ugu dambaysay, Waxaana 6 ka mida Duqaymahaasi oo dhacay 9 November illaa iyo 12 November ee Sannadkan lagu dilay 40 Dagaalamayaal Alshabaab iyo ISIS ka tirsan.
Sannadkii hore ee 2016 waxay dhamaayeen Duqaymaha ay Maraykanku ka sameeyeen Somalia illaa iyo 15 Weerar oo dhinaca Cirka ah, taasoo u dhiganta 3 Billood Weeradda ay sameeyeen Sannadkan, Waxayna taasi muujinaysaa inay kordhiyeen Ciidamadda Maraykanku beegsiga Kooxaha Argigixisada ah ee Somalia, sida lagu sheegay Warbixin ka soo baxday Pentagon-ka.
Bishan waxay Maraykanku fuliyeen Duqayntii ugu horaysay ee ay la beegsadaan Kooxda ISIS ee ka howl gala Deegaanadda Puntland, kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyay welwel laga muujinayay koritaankooda.
Baarlamaanka oo Maanta la horgaynayo Warbixintii Qalbidhagax iyo Mooshino iska soo horjeeda.